FARITRA ANOSY : Miha mahazo vahana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany « Mica »
Madagasikara dia malaza amin’ny fananana harena voajanahary maro. Betsaka amin’ireny mihitsy aza no voalaza fa tsy misy raha tsy eto an-toerana ihany. 11 janvier 2018
Ny faritra sy ireo distrika tsirairay manerana ny nosy ihany koa anefa dia manana ireo harena mampiavaka azy tsirairay, toy ny faritra Anosy. Ity farany izay isan’ny faritra manana ny maha izy azy tokoa amin’ny lafiny maro. Ankoatra ny lafiny fizahantany sy ny harena an-dranomasina mantsy dia tsy latsa-danja ihany koa izy amin’ny harena an-kibon’ny tany. Hatramin’ny ela no efa nahalalana ny faritra Anosy amin’ny fananana fasimainty betsaka ka mampiroborobo ny fitrandrahana izany any an-toerana. Tato anatin’ny dimy taona teo eo anefa izao dia miha mahazo vahana any amin’ny faritra Anosy iny indray ny fitrandrahana “Mica” sy ny fandraharahana izany. Mihamaro araka izany ireo mpandraharaha sy mpahazo tombontsoa amin’ity resaka “Mica” ity any an-toerana.
Tsara ho fantatra fa efa an-taonany maro no nanao izao fitrandrahana izao tany amin’ny faritra Anosy sy Androy ny orinasa tsy miankina iray ao Taolagnaro. Nisy vanim-potoana nisedra olana goavana ity seha-pihariana amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana, araka ny fanazavana. Tsy nahavitana na inona na inona mihitsy mantsy ny fandrenesana ireo asan-dahalo niseho sesilany, indrindra tao amin’ny faritr’Amboasary iny.
Sahirana araka izany ireo mpisehatra amin’ity seha-pihariana ity tamin’ny fanangonana ny vokatra. Tao anatin’ny roa taona kosa anefa izay, hoy ny talen’ny orinasa mpitrandraka, noho ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana dia mizotra tsara araka ny tokony ho izy ny fandraharahana ataon’izy ireo. Araka ny fantatra dia niha nitombo hatrany ny vokatra azo nandritra izay nanaovana ity asa fitrandrahana ity izay. Raha ho an’ny taona 2017 manokana izao dia azo ambara ho nitombo avo roa heny noho ny isan-taona ny vokatra azo.